Fandaharana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fandaharana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Archives ho an'ny teknolojia / IT / Programming
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny kisary kilasy sy ny kisary an-tsary dia ny kisary an-dakilasy maneho ny kilasy sy ny fifandraisan'izy ireo raha ny sary kisary kosa dia maneho ireo zavatra sy ny fifandraisan'izy ireo amin'izy ireo amin'ny fotoana iray manokana. UML dia mijoro ho an'ny Unified Modelling Language. Manampy amin'ny famolavolana modely miorina amin'ny zavatra hamoronana vahaolana amin'ny lozisialy. […]
Fahasamihafana eo amin'ny tabilao fampiasana sy ny kisary asa atao
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny kisary fampiasana sy ny kisarisarin'asa dia ny fampiasana ny kisary fampiasana manampy ny maodelin'ny rafitra sy ny fifandraisan'ny mpampiasa raha ny sary kosa dia manampy amin'ny maodely ny fizotran'ny rafitra. UML dia mijoro ho an'ny Unified Modelling Language. Tsy mitovy amin'ny fiteny fandaharana hafa toa ny C, C ++, Java. It […]
Fahasamihafana eo amin'ny fivarotana ambony ambany sy ambany
8 Jona 2018 Narotsak'i Lithmee
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny parsing ambony sy ambany dia ny fanaovana ny parsing etsy ambony manatanteraka ny parsing avy amin'ny marika mibaribary ka hatramin'ny string input raha ny parsing etsy ambany kosa dia manatanteraka ny parsing avy amin'ny string string mankany amin'ny marika fanombohana. Ankoatr'izay, fahasamihafana lehibe iray hafa eo amin'ny parsing ambony ambany sy ambany dia ny […]
Fahasamihafana eo amin'ny fanambarana sy ny famaritana ao amin'ny C
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fanambarana sy ny famaritana ao amin'ny C dia ny fanambarana ao amin'ny C milaza ny mpamorona momba ny anarana anarana, karazana fiverenana ary ny masontsivana ary ny famaritana ao amin'ny C dia misy ny tena fampiharana ilay asa. Izany hoe, ny fanambarana dia manome fampahalalana momba ny fiasan'ny mpamorona, fa ny famaritana kosa dia misy ny tena fanambaràn'ny […]
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny CakePHP sy CodeIgniter dia ny CakePHP manome ORM inbuilt raha i CodeIgniter dia mila mampiasa tranombokin'ny antoko fahatelo ho an'ny ORM. Ny fahasamihafana lehibe iray hafa misy eo amin'ny CakePHP sy CodeIgniter dia ny CakePHP manana kaody mamorona kaody, asa fiantsoana fiara efa voafaritra mialoha, ary fanohanana Ajax natsangana, ary ny CodeIgniter dia tsy manana ireo fiasa ireo ary […]
Fahasamihafana eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina
6 Jona 2018 Narotsak'i Lithmee
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny tamba-jotra sy ny fianarana lalina dia ny tambajotra neural miasa mitovy amin'ny neurons ao amin'ny ati-dohan'ny olombelona mba hanao asa computation isan-karazany haingana kokoa raha ny fianarana lalina kosa dia karazana fianarana milina manokana izay manahaka ny fomba fianarana ampiasain'ny olombelona hahazoana fahalalana. Ny tambajotra Neural dia manampy amin'ny fananganana maodely azo vinavina […]
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny informatika kognitive sy ny fianarana milina dia ny computing kognitive dia teknolojia fa ny machine machine kosa dia manondro algorithma hamahana olana. Ny computing kognitive dia mampiasa algorithma fianarana milina. Ny Cognitive Computing dia manome ny fahaizana solosaina hanamboarana sy hamenoana ny fahaizan'ny olombelona misaina handray fanapahan-kevitra. Ny fianarana ny milina dia mamela ny fivoarana algorithma fianarana samirery […]
Fahasamihafana eo amin'ny fonosana sy ny interface ao Java
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Package sy Interface any Java dia ny Package manampy amin'ny fanasokajiana ireo kilasy amin'ny fomba hidirana sy hitazomana azy ireo mora foana ary ny Interface kosa dia manampy amin'ny fampiharana lova maro sy hahazoana abstraction. Java dia iray amin'ireo fiteny fandefasana programa malaza indrindra. Ny tombony lehibe ho an'i Java dia ny fanohanana ny object oriented […]
Fahasamihafana eo amin'ny Programme Anaconda sy Python
4 Jona 2018 Narotsak'i Lithmee
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Anaconda sy ny Python Programming dia ny Anaconda dia fizarana ny fiteny fandaharana Python sy R ho an'ny siansa data sy ny fianarana milina ary ny Python Programming kosa dia fiteny fandefasana ambaratonga avo lenta. Anaconda dia azo ampiasaina amin'ny rindranasa hafa, saingy ampiasaina indrindra amin'ny lahasa momba ny siansa sy angovo momba ny angovo. […]
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fiteny Matlab sy C dia ny Matlab dia tontolon'ny informatika mifanerasera raha toa kosa ny fiteny C dia fiteny fandaharam-pianarana ankapobeny avo lenta. Ankoatr'izay, Matlab dia ampiasaina amin'ny lahasa siansa sy injeniera ary rindrambaiko be karama raha ny fiteny C kosa tanjona ankapobeny ary loharano misokatra. Matlab dia tontolo iainana […]
Fahasamihafana eo amin'ny HVGA sy WQVGA
Fahasamihafana eo amin'ny Nap sy ny torimaso
Fahasamihafana eo amin'ny Mitochondria sy Plastids
Fahasamihafana eo amin'i Rutherford sy Bohr